UGBM FENO 45 TAONA - Union des Groupes Bibliques de Madagascar UGBM FENO 45 TAONA - Union des Groupes Bibliques de Madagascar
Home Uncategorized UGBM FENO 45 TAONA
UGBM FENO 45 TAONA ( 1971 – 2016 )
– Fankalazana manokana ny Anaran’Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ny Asabotsy 28 May 2016 manomboka amin’ny 9 ora maraina ao amin’ny Akany FLM Ambatovinaky ;
– Fampitomboana bebe kokoa ny fampahafantarana ny Fikambanana amin’ny alalan’ny haino ama-jery sy ny fifampiresahana amin’ny manam-pahefana samihafa (fanjakana,fiangonana,sekoly sy ny tontolo manodidina azy) ka ampahafantarina amin’izany ireto :
1.NY VINANY :
“Mahafantatra an’i Kristy ary mampahafantatra Azy amin’ny mpianatra” Marihina fa ny VINA dia fitambaran’ny zavatra roa dia ny tsy fahafaham-po lalina amin’ny zava-misy sy ny fahatakarana ny tokony ho izy.
Tsy mahafa-po lalina ny UGBM ny mahita mpianatra marobe avara-pianarana sy manam-pahaizana izay ho avin’ny firenena kanefa tsy mahalala an’I Kristy; tsy matahotra an’Andriamanitra; tsy manao ny marina. Isika Malagasy mantsy dia manan-karena olo-manga saingy mahantra olo-marina raha ny zava-misy iainana no tazanina.
Takatry ny UGBM kosa fa ny fitoriana ny Filazantsara na ny Vaovao Mahafaly irery ihany no fomba tokana sady drafitr’Andriamanitra (Marka 16.15) hahatonga ireo mpianatra ireo ho tonga amin’ny finoana an’I Kristy sy hatahotra an’Andriamanitra ary hiaina ny fahamarinana satria izay rehetra manao ny marina no zanany naterany (I Jaona 2.29) . Amin’izay dia sady manan-karena olo-manga isika Malagasy no manan-karena olo-marina ihany koa.
Avy amin’Andriamanitra izao VINA izao satria Andriamanitra mihitsy no nanome modely voalohany ny amin’izany. Tamin’ny famoronany ny lanitra sy ny tany (Genesisy 1.1) izay zava-dehibe nohariany voalohany indrindra mantsy dia tsy nahafa-po lalina an’Andriamanitra ny nahita ny tany tsy nisy endrika sady foana ary ny aizina no tambonin’ny lalina (Genesisy 1.2) ary takany ny tokony ho izy ka notanterahiny avy hatrany tamin’ny nitenenany hoe “Misia mazava; dia nisy ny mazava” (Genesisy 1.3).
VINA IFES 2020 :
« Mpianatra voavolavolan’ny fiaraha-monin’ny mpanara-dia an’i Kristy, voaovan’ny Filazantsara ary misy fiantraikany eny amin’ny Oniversite sy ny Sekoly Segondera, ny Fiangonana, ny Fiaraha-monina mba ho voninahitr’i Kristy »
VINA UGBM 2021 :
« Mpikambana Mijoro,Mandroso,Mampandroso,manatratra ny Distrika rehetra eran’i Madagasikara amin’ny fankalazana ny Tompo noho ny faha-50 taonan’ny Fikambanana amin’ny taona 2021”
2.INONA NY UGBM :
Ny « Union des Groupes Bibliques de Madagascar » dia fikambanana ara-pilazantsara miasa manokana eo anivon’ny mpianatra ambaratonga faharoa sy ambony. Fiombonan’ny sokajy miisa 3 dia ny :
GBS = Groupes Bibliques Secondaires (Lycées, collèges publiques et privées…)
GBU = Groupes Bibliques Universitaires (Universités, instituts supérieurs publics et privés)
GBA = Groupes Bibliques des Amis = Sakaizan’ny Tompo aloha vao Sakaizan’ny GB ka manohana ara-tolo-tsaina, ara-panahy, ara-bola sy ara-pitaovana » , ny mpikambana ao dia avy nanao GBS sy/na GBU efa tranainy sy vao haingana koa ary ireo resy lahatra @ vinan’ny UGBM.
Ankehitriny,manerana an’i Madagasikara dia ahitana :
– GBS 94, izany hoe, hita amin’ny Distrika 94 ;
– GBU 17, izany hoe, hita amina Oniversite miisa 17;
– GBA Organisés 39, izany hoe, hita amin’ny toerana 39.
IRAISAM-PIRENENA : mpikambana feno ao amin’ny IFES (International Fellowship of Evangelical Students) nanomboka ny taona 1995 izay any Oxford Angleterre no Foibeny sady mpikambana ao amin’ny GBUAF (Groupes Bibliques Universitaires d’Afrique Francophones) izay any Abidjan Côte d’Ivoire no Foibeny.
MAMPIAVAKA : Fikambanana tsy manao politika fa mivavaka ho an’ny firenena sy ny mpitondra fanjakana mba hitodika amin’I Kristy; tsy manavakavaka finoana Kristiana fa ny fanekena an’I Jeso Kristy ho Tompo sy Mpamonjy no fototra iorenany sy ny fanekena ny Baiboly na ny Tenin’Andriamanitra ho fahefana fara-tampony mifehy ny fiainany amin’izay rehetra atao; tsy manao fitadiavam-bola hahazoana tombony ifampizaran’ny mpikambana.
FIDIRANA HO MPIKAMBANA :
-Manao ny fanekem-pinoana ampahibemaso na Confession de Foi fa Jeso Kristy Irery no Tompo sy Mpamonjy ny tena manokana ;
-Manao fanekem-pirotsahana ho mpikambana ampahibemaso na Confession d’Adhésion fa manaiky ny Sata sy ny Fitsipika Anatiny mifehy ny fikambanana ka vonona hanaja sy hampihatra izany ary hanantanteraka ny asa iantsoana sy ifandaminana rehetra .
3. HAREM-PANAHY SY VAIN-DOHAN-DRAHARAHA MANEHO FA MISIONERA NY GROUPES BIBLIQUES :
– Fitoriana ny Filazantsara na ny Vaovao Mahafaly amin-kafanampo tanterahina amin’ny alalan’ny “Contact Personnel, Evangélisation Par Amitié, Cellule d’Etude Biblique, Camp de Petite Vacance, Témoignage de vie quotidienne…” ;
– Hetaheta lalina amin’ny fandinihana ny Soratra Masina tanterahina amin’ny alalan’ny Méditation Personnelle, Etude Biblique, Exposé Biblique, Conférence, Réunion Générale, Assemblée Générale, Congrès, Camp Provincial des GBS, Camp National des GBU, Camp National des Amis… ;- Fanokanan-tena amin’ny vavaka tanterahina amin’ny alalan’ny duo/trio de prière, chaîne de prière, veillée de prière, journée de prière , rendez-vous de prière..; – Fanokanan-tena amin’ny asa misiona sy fananganana satelita amin’ny toeram-baovao tanterahina amin’ny alalan’ny Tournée d’Evangélisation, fanirahana Misionera Bénévole sy fanapariahana ny Baiboly sy ny Filazantsara ary ny Literatiora Kristiana ;
-Fampiorenana sy Fanabeazana ny mambra amin’ny maha olona manontolo sy ny olona rehetra azy ireo : ara-panahy, ara-tsaina, ara-
pihetseham-po sy fitondrantena, ara-pitiavan-tanidrazana sy fiarovana ny tontolo iainana noharian’Andriamanitra, ara-kolontsaina, ara-batana… ;
– Fanohanana sy fampandehanana ny asa rehetra araka olona (Matihanina sy Bénévole) ,ara-pitaovana (tany ,trano, fiara,,fitaovam-birao sy serasera samihafa), ara-bola (Don, Souscription ,Levée de Fonds)…%
Antananarivo, faha 21 May 2016
NY FILOHA, NY SEKRETERA JENERALY,
Prof. RAFILIPOJAONA Dr.RAKOTOMALALA A.Benjamina